भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीसंगको भेट परिणाममूखि हुन्छ : प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराई – Himal FM 90.2 MHz
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीसंगको भेट परिणाममूखि हुन्छ : प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराई
बिचार – बिमर्श adminhimal March 22, 2020
अघिल्लो बुधबार खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराईले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर खोटाङको विकास समाबेश लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यहि विषयमा संघीय सांसद विशाल भट्टराईसंग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
मन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा के छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ अहिले सरकारमा नयाँ मन्त्रीको भएपछि उहाँले जनपेक्षित रुपमा सफलताका साथ कामलाई अगाडी बडाउनु भएको छ । धेरै मान्छेले उहाँबाट यस्तो काम हुन्छ भनेर अपेक्षा नगरेको स्थितिमा आज जे काम भएका छन् म उहाँ प्रति प्रशंसनीय छु । मैले खोटाङ जिल्लाका केहि महत्वपूर्ण विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय डेलिकेसन सहित गएको थिए । मैले उहाँलाई राखेका मागहरु जम्मा पाचँ वटा छन् । पहिलो माग हामीले हलेसीको गुरुयोेजना बनाइसकेका छौँ ।
हलेसी गुफा नजिक गएको मार्गलाई केही २/३ किलोमिटर डाइभट गर्नु पर्छ र त्यो गुफा पनि संरक्षण गर्न र बृहत् हलेसीको विकास गर्न मार्गलाई अलि लम्ब्याउने र त्यस क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीमात्र चलाउने प्रताव हामीले माग गरेका छौ । दोस्रो मध्येपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगत दिक्तेल—चखेवा सडकखण्ड अन्र्तगत तिन वटा खोलामा पुल निमार्ण बाँकी छन् । ति पुल यथाशीघ्र निमार्णको गर्न माग गरेका छौँ ।
तेस्रो हलेसी जयरामघाटको बाटो डबल लाईनको छैन र यस्लाई डबललाईन बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेको छौ । अर्को महत्वपुर्ण माग सुनकोसी करीडोरको सुनकोसी घुर्मी देखी चतरासम्म जाने बाटो लामो समय देखी टेन्डर भएर पनि अघि बढेको छैन । त्यसलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउनु पर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ । मुलतः मन्त्री ज्यूसंग खोटाङका लागि मागेका मागहरु यिनै हुन् ।
मन्त्री ज्यूबाट आश्वासन बाहेक अन्य के अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
यस पटको डलिकेसन खालि देखाउनका लागि मात्र नभएर परिणाममुखि होस् भनेर त्यस भेगका जनसमुदायका अग्रज व्यक्तित्वदेखी मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागको डिजीलाई समेत निम्त्याइएको थियो । उहाँहरु सहित भएका कारणले रहेक मागका विषयमा गहिरो छलफल गर्न पाईयो । खाली माग देखाउन मात्रै भएको भए म मात्रै जान्थ्ये होला ।
अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारीहरु सहित भएको कारणले गर्दा एक्सननै लिने खालको कुरा भएको छ । जस्तो की, जयराम हलेसी सडक खण्डमा उठाएको डबल लाईनको बाटोको लागि तत्काल प्राविधीक पठाएर सर्वे डिजाइन गर्ने कुरा भएको छ ।
दिक्तेल—चखेवा सडकखण्डको तिन वटा पुलहरु तत्कालै टेण्डरमा लाग्ने कुरा भएको छ, यसको सर्वे डिजाइन पहिला नै भएको छ र हलेसीलई संरक्षण गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई थोरै डाइभट गर्नको लागी तुरुन्तै टोली आउने भनिएको छ । यस अर्थमा परिणाममुखि नै भएको महसुस गरेका छौ ।